အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ အလှအပ
15 Responses to “အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ အလှအပ”
ရုပ်ရဲ့ အလှ ကို သင်္ခါရ က ချေဖျက်နိုင်ပေမယ့်..
စိတ်ရဲ့ အလှ ကို တော့ ဘယ်အရာမှ မဖျက်စီးနိုင်ပဲ အမြဲ နုပျိုနေစေတယ် ပေါ့နော...
ဟိဟိ ... ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ပေမယ့်..
စပ်စုတဲ့အကျင့်ရှိလို့ တစေ့တစ်စောင်း. လာရောက်ဖတ်ရှုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ.
လှတာနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတာတော့ နဲနဲကွာမယ်ထင်တယ်။ ချစ်စရာကောင်းတာက ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိမယ်ထင်တယ်။ ရုပ်လဲပြင် စိတ်ကိုလဲပြင်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိန်းခလေးဆိုရင်တော့ ပြောစရာမလိုလောက်အောင် ဘက်ပေါင်းစုံပြည့်စုံသွားတော့တာပေါ့။
ဆိုပါစို့ ။ ကျွန်တော်တို့ ယောက်ျားလေး တစ်အုပ်လိုက်ကြီး လက္ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေကြတယ်ပေါ့။
အရမ်းလှတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ဖြတ်လျောက်သွားရင်.."လှတယ်ကွ" ဆိုပြီးလိုက်ငမ်းမယ်ပေါ့။
ဒါက.. အပေါ်ယံကြည့်တဲ့ ခဏတာအတွက်ပါ။တကယ်လို့အဲ့ကောင်မလေးက စိတ်ထားမကောင်းဘူး အကျင့်မကောင်းဘူးဆိုရင်..နောက်..သူဘယ်လောက်ပဲလှနေပါစေ.။ ဘယ်သူမှ စိတ်ဝင်စားတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ရွက်ကြမ်းရေကျို ကောင်မလေး တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်နေပါစေ။ သူ့့မှာ ဖြုစင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ .. မိန်းမပီသတဲ့စရိုက်လက္ခဏာလေးတွေ..အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်တာ..သူတစ်ပါးကိုကူညီတတ်တာ..
etc...ဆိုတဲ့အကျင့်ကောင်းလေးတွေသာပိုင်ဆိုင်ထားရင်..အဟဲ "ဒီကောင်မလေး ချစ်မွေးပါတယ်".
ဆိုပြီး.. ပြောကြမှာပါပဲ။ တကယ်တော့..အပေါ်ယံလှတာထက်..စိတ်ထားလှဖို့ လဲ အရေးကြီးပါတယ်။
အပေါ်ကရေးထားတဲ့.. ကိုကိုမောင်ကိုပဲကြည့်... လှတာထက်.. ချစ်စရာကောင်းတာကို ပိုသဘောကျတယ်.. :D အပေါ်ယံရုပ်ရည်လှတာက တခဏပါ။ အတွင်းစိတ် လှပတာမှတန်ဖိုးရှိတာပါ။
စကားမစပ်.. ကျွန်တော်တိုိ့အမ ချော ကိုပဲကြည့်..ရုပ်ကသာမလာတာ.. စိတ်ထားလေးကျတော့ ဖြုစင်တော့.. ဒီကိုလာလည်တဲ့လူတိုင်း စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားတာပေါ့နော်... :D :D :D
ရှင်ကျုပ်ကိုပါ ဖဲ့သွားပါလားဟေ.... ကိုယ့်အစ်မကို ဒီလောက် မြှောက်ပင့်သွားရလား..
ကျုပ်က ဒီလောက်ရုပ်မဆိုးပါဘူး... သွားလေးနည်းနည်းကျဲပြီး အသားမဲနေတာကလွဲရင်ပေါ့..
မျက်လုံးစွေပြီး နှာခေါင်းတိုတာလောက်ကတော့ ရုပ်ဆိုးတယ် မခေါ်ပါဘူးနော်...
စိတ်ထားဖြူတာမဖြူတာလဲ သူက မြင်ရတာကျလို့.. ဟွန့် နင်တော့လား.. :P
အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ အလှအပ ကိုရေးပြီးရင် အမျိုးသားဒို့အတွက် အလှအပကိုလည်းရေးဦးလေ....။
ရုပ်ကပြင်လို့ရတယ် စိတ်က ပြင်ဖို့မလွယ်လို့
တချို့တွေက ကျောင်းတုန်းက ကွင်းလို့သာ ပြောကြတာ အားကြီး ဆရာလုပ်တာလည်း တွေ့ဖူးတယ်ဗျး)
အမ ပြောတာဟုတ်တာပါတယ် ..လူဟာအဓိက ရုပ်လှဖို့ ထက် စိတ်ထား လှဖို့ ပိုလိုအပ်ပါတယ်လေ။။ ညီမလေး ဒို့မချောလိုပေါ့ နာမည်နဲ့ လိုက်အောင်ကိုချောလဲချော ချစ်ဖို့ လဲကောင်းပြီးရင် စာရေးတာလဲ ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး တွေများများရှိရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်။။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုပြည့်စုံဖို့ ဆိုတာ အရမ်းကို ရှာပါးပါတယ်လေ..
ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပဲအမ.. ဒီထက်ကောင်းတဲ့ စာတွေများများတင်နိုင်ပါစေအမ..
ဟုတ်တယ် အမ ရုပ်လှဖို့ထက် စိတ်လှ ဖို့လိုတယ်။
ကိုယ်ကလည်း လှမှ မလှတာကို :P
အမျိုးသမီးတို့ရဲ့အလှအပဆိုတော့အရမ်းစိတ်ဝင်စားပြီးဖတ်သွားပါတယ်။ စိတ်ထားလှပဖို့လည်းကြိုးစားနေပါတယ်မချောရယ်...။ လူကမလှလို့လေ...။ မချောကတော့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်လှမယ်လို့ထင်တယ်။ ဟီးးးးးး။(ဟင်းများချက်ကျွေးမလားလို့....)
ရုပ်ရော စိတ်ရော လှချင်လိုက်တာနော်။
စိတ်ကတော့ လှသထက်လှအောင် ကြိုးစားနေတာဘဲ။
ရုပ်ကတော့ ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီလုပ်မှဘဲရတော့မယ် ချောရေ..။ :)
I think you should know about personal grooming and how is the attraction of lady, it's very deep and wide. So i would like to advice you learn more than now.I think it's really important for the single, especially you.Right ?